Ukhathalelo surgical zezulu lokucoca umsi evacuator evacuation indlela kuba icebo eliphethe umtha wokukhanya omninwaname optima-e-Umsi evacuator-Hunan Astiland Zonyango Aesthetics Iteknoloji Co., Ltd.
Lo msi wokuhambisa uthungelwe ukuba ufunxe ngokufanelekileyo kwaye ucofe umsi wokuhlinzwa, ivumba, iinkcukacha, kunye nezinye izinto ezinobungozi ezinokuvela ekuhlinzwa / ekusebenzeni. Inokuwucoca umoya, inciphise umsi oyingozi kwaye iqinisekise ukhuseleko lwabasebenzi bezonyango kunye nezigulana.
Xa uqhuba umsebenzi ngommese wombane ohamba rhoqo, CO2 Laser upasuaji System, Nd: I-laser ye-laser ukusika, ukutshisa, ukufudumeza, ukuqinisa izicubu eziguqulweyo zengqondo, ziya kuvelisa umsi, ivumba, iinkcukacha. I-HN2, HCN, H3S, intsholongwane kunye nezinye ezinobungozi, ezinobungozi, ezoyikekayo, ioyile ezinukayo, inkungu kunye nomsi, njl .Okuya kuba ngumsi ukuthunga kuyilelwe ukufunxa ngokufanelekileyo kunye nokucoca umsi wokuhlinzwa, ivumba, iinkcukacha, kunye nezinye izinto ezinokuba yingozi kumatshini wokuhlinzwa . Inokuwucoca umoya, inciphise umsi oyingozi kwaye iqinisekise ukhuseleko lwabasebenzi bezonyango kunye nezigulana.
Ukuqulunqwa kwempompo yomsi ophuma ngexesha lokuhlinzwa kwe-laser kunokubangela iqela legumbi lokusebenza lisemngciphekweni.
1. Ingxolo ephantsi
2. I-gesi yokuphefumla ingamanzi kwaye ihlanjululwe yi-multilayer
3. Isantya esiphezulu fan sinokugqibezela ukuhambisa igesi
4. Umsebenzi werediyasi yendawo yokutsala ubanzi
5. Ukhuseleko, ukuthembeka, ukubakho.
· Uyilo lwenzelwa ukuba lube nokufunxa okuphezulu, umyinge wempompo yokuhamba okuphezulu
· Iphaneli yomsebenzisi-inokuluncedo ukuseta nokusebenza
Ukuboniswa kwe-LED yobomi bokucoca amandla kunye namandla okuntywila, utshintsho olulula lokucoca
Isihluzo sinokufaka iinkcukacha kunye nezinto ezincinci ukuya phantsi kwe-0.012um kunye nokusebenza kwe-99.99995%
I-220 ± 22V AC, 50 ± 1Hz
7 imowudi yokulawula imowudi
0 -3.2m3 / imizuzu
Imowudi ye-potentiometers (ixesha elingelilo le-hierarchical) yendlela yokusebenza yokucoca
Iifilitha zekhabhoni, Isihluzi se-ULPA, njl .nenezine ezineziteyidi ezine.
Ububanzi bobubanzi bokubamba nuzzleΦ
Imisebe yenkqubo yokuthambisa nuzzle Φ
ngaphezulu kwe-99.999%, 0.3 μm
272mm × 290mm × 562mm
umgangatho olungileyo nge-3-layer yokucoca
Umatshini wokudibanisa ulusu we-laser ulungiso lomnatha wolusu olususwini
Isixhobo esiphathwayo se-co2 laser yezixhobo ezinqabileyo zokunxibelelana kwenqanawa umatshini wokukhupha uphawu umatshini-100
Umatshini we-Hydra oksijini i-peet umatshini wobuso wamanzi njenge-oj2